गृहपृष्ठ विचार/ ब्लग हिसाब बुझाउनु नपर्ने राजनीति
भन्न त सर्वोच्चले २०७५ जेठ २ मा पुराएर राखेको छ तर ओली आफैले बनाएको पार्टी नेकपामा रहेर पार्टीको विवाद र संसद विघटनको विरोधमा उत्रिएकाहरु यतिबेला पार्टीमा विटुलो बनेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलाले नेकपामा तरंग ल्याएको कुरा त अब नयाँ रहेन ।
किनकी अब अदालत र निर्वाचन आयोगले मात्र नेकपा छुट्याएन, पार्टीहरु नै पूर्ववत अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अभियानमा बोकेर हिड्न लागेका छन् ।
सबैलाई लागेको थियो मन भारी नै होस्, अब नेताहरु पूर्ववत अवस्थामा फर्किए । तर स्थिति कहाँ सोंचे जस्तो हुन्थ्यो सामाजिक संजाल देखि चिया गफमा समेत नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहको खेदो खन्न छाडेनन् ।
त्यो स्थर यतिसम्म पुग्यो , प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार समेत रहेका सुर्य थापाले माधव नेपाललाई अपराधी भन्दै इख साँधेको स्ट्टस राखे ।
यसै पनि अगाडि देखि नै गुटको छायाँ देखिएको एमाले त्यसमा पनि व्युँझिएको एमालेमा माधव नेपाल पक्षको छायाँ त यति विषालु बन्यो, बरु त्यो पक्षको साथ चाहिएन तर माया फर्कने लक्षण छैन ।
माओवादीमा नफर्कने मनस्थिति बनाएका नेताले उपाध्यक्ष देखि सचिवालय सदस्यसम्मको भाग पाउने चर्चा चल्न थाल्यो । सम्मानजनक पद दिने कुरासँगै तल्ला तहसम्ममा २० प्रतिशत भाग पाउने कुरा आए पछि एमाले जस्तो संगठन बलियो पार्टीमा अब त्यो लाभको अफर कसले छाड्थ्यो ।
यो पनि पढ्नुहोस.. एमालेको नेपाल–खनाल समूह समानान्तर रुपमा अगाडि बढ्ने
माओवादीबाट आएका नेतालाई रातो कार्पेट बिछाउँदा माधव पक्षलाई यतिसम्म वेवास्ता भएको छ कि, निर्वाचित पार्टी उपाध्यक्ष समेत रहेका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज भिम रावलको पद खोसेर ओली समूहले नेकपामा विवाद आए पछि बनाएका लेखराज भट्टलाई जवरजस्ती उभ्याउन खोजिएको छ ।
नेकपा एमालेले देशभरका पार्टी कार्यालयमा आफ्नो बोर्ड राख्ने क्रम सुरु गरे । जसमा बुधबार बिहान नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम कार्यालयमा माधव नेपाल समूहका कार्यकर्ताले बोर्ड राखे । तर, केही समयपछि ओली समूहका कार्यकर्ताहरु आएर माधव समूहले राखेको बोर्ड हुत्याइ दिए र आफूले ल्याएको बोर्ड लगाए ।
यो पनि पढ्नुहोस.. चार्टर्ड उडानको नाममा कहिलेसम्म अनियमितता ?
उनीहरुले इन्चार्ज र अध्यक्ष कार्यकक्षमा क्रमश भिम रावल र भानुभक्त जोशीको सट्टामा लेखराज भट्ट र कर्णबहादुर थापाको नेम प्लेट लगाए । उक्त नेमप्लेट लगाएलगत्तै माधव समूह आएर उक्त नेम प्लेट हटाउन खोज्दा दुई समूहबीच झडप नै भयो ।
होला यति बेला रावल कमजोर होलान् तर अदालतले फर्काएको विन्दुमा पुगे पछि कम्तिमा पूर्ववत अवस्थालाई स्वीकारेको भए हुने भन्ने माधव समूहको धारणा देखिन्छ ।
पार्टी एक हुने आशामा जनताले एमाले–माओवादीको चुनावी गठबन्धनलाई औधी रुचाए । फलस्वरुप झण्डै दुई तिहाइको मत दिए । जनताको अपेक्षा धेरै थिए, त्यसमा स्थिर सरकारको अभिलासा थियो ।
राजनीतिमा विधि र विचार प्रधान हुन्छ भनिन्छ, त्यसमा पनि कम्युनिष्ट हुँ भन्नेहरुमा त्यो अझै लागु होला तर अहिले एमाले जागेको बेला ओली पक्षले अर्को पक्षलाई भनेको छ, ‘हिजो अध्यक्ष ओली माथि धारे हात लगायौ, अहिले कुन मुखले आएका छौं, मास्क लगाएर आउ’ ।
मनमुटाव पक्कै थियो तर यो त जित कसैको थिएन । किनकी हिजो कुन उद्धेश्यका साथ पार्टीको विसर्जन गरिएको थियो ? त्यो के कारण आज यो अवस्थामा आयो भन्ने कुराको समिक्षा त भएन नै त्यस माथि पूर्ववत अवस्थामा फर्कदा पनि त्यो आक्षेप ।
यो पनि पढ्नुहोस.. रुपन्देहीमा पनि एमालेको समानान्तर कमिटी
एमालेकै एक कार्यकर्ताले फेसबुकमा लेखे, ‘एमाले आफ्नो व्यक्तिगत बिर्ता भएसरी सम्मानित नेताहरुलाइ समेत भित्रिन नदिने, फर्काउने, निकाल्ने जस्ता अशिष्ट र अनैतिक अभिव्यक्ती दिनेहरु गएको ३२ महिना कुन दलमा रहेछन् ? ओली–प्रचण्डले सभागृहबाट एकता सहित एमाले र माओवादी केन्द्र नेकपामा समाहित भएको घोषणा गरेपछी पनि यिनिहरु एमाले मै थिए ? अदालतको फैसलाले ओली देखि नेपाल खनाल सबैलाई एकैपटक एमालेमा फर्काएको हैन ? अराजकताको पनि सिमा हुन्छ कमरेडहरु ।’
साँच्चै नेताहरुले कसरी घुमाउँछन्, कार्यकर्ता, कसरी फसाउँछन् जनता र कसरी आफू सर्वस्व बन्छन् । जनताले गरेको त्याग तपस्या र अपेक्षा माथि कतैबाट ध्यान दिनु पर्दैन, जनतालाई त्यसको हिसाव बुझाउन पर्दैन ?